Waa maxay sababta uu Turkiga ugu qeybgali doonin shirka Paris ee looga hadlaayo Liibiya, oo ay ka qeyb galayaan Giriiga, Israa'iil, Giriiga Qubrus'? - Diblomaasi
Diblomaasiyadda & Dunidda
“Kama qaybgeli karno shirka Paris oo Giriiga, Israa’iil iyo maamulka Giriigga Qubrus ay ka qaybgalaan, waxaan u sheegnay (Macron). Tani waa xaaladdeenna. Haddii dalalkan ay ka qeyb galayaan shirka, sido kale looma baahna in ay soo diraan wakiilo gaar ah” ayuu yiri Erdogan oo saxafiyiinta la hadlay markii uu ka soo laabtay shirka.
Turkiga kama qeybgali doono shirka Paris ee looga hadlayo Liibiya oo ay ka qeyb galayaan Giriiga, Israel iyo maamulka Qubrus ee Giriiga, ayuu yiri Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo Axadii ka hadlay kulanka uu la qaatay Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shirka G-20 ee Rome.
Madaxweynaha ayaa xusay in labada mas’uul ay ka wadahadleen arrimo badan, wuxuuna xusay in Faransiisku uu doonayo inuu qabto shir looga hadlayo arrimaha Liibiya oo la mid ah kii ka horreeyay ee Berlin.
Arrimaha ugu waaweyn ee colaadda Liibiya waxaa ka mid ah joogitaanka calooshood u shaqeystayaal. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu ku celceliyay Macron in joogitaanka Turkiga ee dalka ay dagaaladu aafeeyeen uu yahay mid sharci ah oo ku hoos jira heshiis uu la galay dowladda Liibiya. “Askarteennu waxa ay u joogaan qaab macalimiin ah,” ayuu yidhi, isaga oo diiday in joogitaanka Turkiga ee Liibiya aan lala mid dhigi karin calooshood u shaqeystayaasha sharci darrada ah ee dalka ku jooga.
Shirka Paris ee la filayo in la qabto bisha Nofeembar waxa uu ujeedkiisu yahay in la bixiyo dadaal caalami ah oo kama dambays ah si doorashooyin loo qabto dhammaadka sanadka iyo in la taageero bixitaanka ciidamada shisheeye.
Shir madaxeedkan oo ay soo qabanqaabiyeen Qaramada Midoobay, Jarmalka iyo Talyaaniga oo ka dhici doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska 12-ka Nof, ayaa waxaa isugu imaanaya madax heer gobol iyo heer caalami ah.
Geesta kale, xidhiidhka Turkiga kala dhexeeya Faransiiska ayaa dhawaan xumaaday go’aankii Paris ee ahaa in diyaaradaha dagaalka ee Rafale ee Faransiisku sameeyo laga iibiyo Giriiga iyadoo xiisadda bariga Mediterranean-ka ay mar kale kor u kacday ka dib bilo degganaansho ah.
Madaxweynaha Turkiga ayaa ku macneeyay in Macron uu u sheegay in Giriiga ay heystaan ​​lacag, isaga oo ku jawaabay in Athens ay leedahay deyn dhan 400 bilyan oo Yuuro oo u dhiganta 462.7 bilyan oo doolar.
In kasta oo ay sheegtay in aanay wax niyad ah u haynin in ay tartan hub la gasho deriskeeda iyo xulafada NATO ee Turkiga, Giriiggu waxa uu dhawaan ku dhawaaqay in uu Faransiisku ka soo iibsaday saddex markab oo cusub oo Belharra ah iyada oo ay ikhtiyaar u tahay mid kale.
Horaantii bishii hore, Giriiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay iibsadaan lix diyaaradood oo kale oo ah nooca dagaalka ee Rafale.
Giriiga ayaa inta badan waxaa soo kala dhexgalay xiisado kala dhaxeeya dalka Turkiga oo ay jaarka yihiin arimo badan oo kala duwan, laga soo bilaabo sheegashooyinka ku saabsan kheyraadka kaarboonka biyaha ee badda Aegean ilaa iyo in jasiiradaha laga saaro. Barnaamijka hubka ee Giriiga ayaa loogu talagalay inuu ka hortago caqabadaha Turkiga ee Bariga Mediterranean-ka, taas oo ka soo horjeeda Faransiiska oo ka mid ah dhowrka waddan ee EU-da ee bixiya taageerada dadweynaha bilihii la soo dhaafay.
Ku dhawaaqista kordhinta xiriirka milatari ee Faransiiska ayaa timid ka dib markii wasiirka difaaca Hulusi Akar uu sheegay dhawaan in diyaaradaha Faransiiska ee Rafale aysan wax ka bedeli doonin dheelitirka awoodda gobolka.
Arrinta kale ee laga wada hadlay ayaa ah xaaladda Afgaanistaan, ayuu yiri madaxweynaha. Wuxuu ku celceliyay dadaalka Turkiga uu ku taageerayo dadka reer Afgaanistaan, wuxuuna sheegay in Turkiga ay kala shaqeynayaan Qatar garoonka caalamiga ah ee Kabul Hamid Karzai, kaasoo muhiim u ah sii wadida xiriirka diblomaasiyadeed iyo gargaarka bini’aadanimo ee dalka ay aafeeyeen dagaalada.
Labada hoggaamiye waxay sidoo kale taabteen Koonfurta Caucasus, halkaas oo dadaallada dib-u-dhiska ay ka bilowdeen ka dib markii Azerbaijan ay dib u heshay qaybo badan oo ka mid ah dhulkii Armenia ee gobolka Nagorno-Karabakh ka dib colaad lix toddobaad ah oo ay la gashay Yerevan sannadkii hore.
Turkiga ayaa soo jeediyay in la sameeyo madal iskaashi oo ka kooban lix waddan oo ay ku jiraan Ruushka, Turkiga, Azerbaijan, Iran, Georgia iyo Armenia. “Georgia uma eka fikrad wanaagsan sababtoo ah Ruushka,” ayuu yiri Erdoğan, isaga oo intaa ku daray in mawqifka maamulka cusub ee Iran uusan weli caddayn.
Related Topics:Giriiga Qubrus'?Israa'iiloo ay ka qeyb galayaan GiriigaWaa maxay sababta uu Turkiga ugu qeybgali doonin shirka Paris ee looga hadlaayo Liibiya
Diblomaasi waa deggel hormuud u ah falanqeynta Siyaasadda Arrimaha Dibadda, wararka madaxa bannaan iyo ajendaha-dejinta wararka, falanqaynta siyaasadeed iyo faallooyinka fikirka-gaarka ah ee sida gaar ah loogu qoray/diyaariyey jiilka cusub.
Turkiga ayaa shalay u yeertay safiirada 10 dal oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Mareykanka, kadib markii ay ku baaqeen in lasii daayo hoggaamiye ka tirsan bulshada rayidka, kaasi oo xarigiisa uu dhaawacay xiriirka Ankara iyo Reer Galbeedka.
Cusmaan Kavala oo ah 64 jir Turkish ah oo ku dhashay magaaladda Paris ee dalka Faransiiska ayaa xabsi ku jiray tan iyo 2017 isaga oo aan wax dambi ah lagu helin. Waxa uu wajahayaa eedeymo dhowr ah oo la xiriira dibadbax ka dhan ah dowladda oo dhacay 2013 iyo afgambigii fashilmay ee 2016. Kavala waa uu beeniyey eedeymahaas.
War-saxaafadeed ay soo saareen Isniinti ayey safiirada dalalka Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden iyo Mareykanka waxay ku baaqeen “xal caddaalad oo deg deg ah oo laga gaaro kiiskiisa.”
“Dib u dhaca sii socda ee maxkamadeyntiisa…waxay mugdi gelinaysaa ixtiraamka demoraadiyadda, sarreynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka Turkey,” ayey yiraahdeen.
Safaaradahan ayaa ugu baaqay Turkey inay raacdo xukunka Golaha Yurub, oo ah urur xuquuqda aadanaha qaabilsan oo ay ku biirtay 1950.
Golaha Yurub ayaa ka digay inay billaabi doonaan dacwad edbin oo ka dhan ah Turkey “haddii aan Kavala lasii deynin kahor” kulanka golaha ee Nofeember 30 illaa Diseember 2.
Maxkamadda ayaa mar kale kiiska Kavala dhageysan doonta 26-ka Nofeember.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda ee Turkey ayaa lagu sheegay in safiirada loo yeeray ay shalay subax tageen xarunta wasaaradda. Diblomaasiyiinta waxaa lagu wargeliyey in war-saxaafadeedkooda “uu ka tallaabsaday xuduudaha iskuna dayey inuu siyaasadeeyo hanaan sharci, islamarkaana cadaadiyo garsoorka,” ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibedda.
“Waxaa lagu wargeliyey inay diirad saarista kiisas la xiriira maxkamadaha Turkey, gaar ahaan Kavala ay tahay mid aan daacad aheyn oo laba wejiilenimo ah.”
Wasiirka Arrimaha Gudaha Turkey Suleyman Soylu ayaa sidoo kale cambaareeyey qoraalka 10-ka safaaradood.
“Ma ahan wax la aqbali karo in safiirada ay soo-jeedimo ama tallooyin ka dhiibtaan kiis sharci ah oo socda,” ayuu Soylu ku yiri qoraal uu soo dhigay twitter.
Wasiirka Cadaaladda Turkey Cabdulhamit Gul ayaa Isniintii isna yiri “Safiirna ma lahan xaq uu tallooyin ama soo jeedimo ugu gudbiyo maxkamadaheena.”
Xariirka Hab-dhaqameed ee Turkiga iyo Reer galbeed
Marka laga eego dhinaca taariikheed, jihaynta siyaasadda gudaha iyo dibedda ee Turkigu waxay mar walba ku wajahnayd beesha caalamka ee reer Galbeedka.
Laga soo bilaabo qarnigii 19-aad oo si xowli leh u socday aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga horaantii 1920-meeyadii, dadaalladii Turkiga ee la qabsiga dhaqanada reer Galbeedka oo runtii noqday arrin soo jireen ah illaa iyo maantana Turkiga ay dareemayso in wali reer Galbeedka faragelin ku hayaan arrimahooda qaaska u ah siyaasadda dalkeeda.
Aad bay ugu sahlanayd quwadaha reer Galbeedka inay u arkaan Turkiga inuu yahay dal reer galbeed ah oo reer Yurub ah intii lagu jiray xilligii Dagaalkii Qaboobaa ilaa inta ay dhinacyadu khuseeyaan ay waddaageen aragtiyo hanjabaad oo isku mid ah iyo tixgelinno istiraatiiji ah.
Waxaa la ogyahay in kala diristii Midowgii Soofiyeeti ay ilaa xad wiiqday xabagta istiraatiijiga ah ee amniga ku xiraya Turkiga reer Galbeedka. Waxaa hubaal ah in awoodda dhaqaajinta ee Turkiga iyo raadinta aan kala joogsiga lahayn ee madaxbannaanida istiraatiijiyadeed ay kor u kacday tobannaankii sano ee u dambeeyay iyadoo mudnaanta awoodaha reer Galbeedka ee siyaasadda caalamka ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacday marka la barbardhigo kor u kaca iyo soo nooleynta awoodaha aan reer Galbeedka ahayn sida Shiinaha iyo Ruushka.
Maaddaama unipolarity-ku ay si tartiib tartiib ah u banneysay siyaasado badan oo caalami ah, waxaa sidoo kale kordhay awoodda Turkiga ee ah in la raaco siyaasad dibadeed oo dhinacyo badan, iyo xiriirka Turkiga uu la leeyahay quwadaha aan reer Galbeedka ahayn ayaa si isa soo taraysa u kobcay.
Turkiga wuxuu horumar balaaran ka sameeyey dhulalka caalamka ee ugu istiraatijiyeysan caalamka sida Bariga Dhexe ee ballaaran, Caucasus, Waqooyiga Afrika iyo Bariga Mediterranean-ka, wuxuuna bilaabay inuu saameyn ku yeesho, waxayna dhalisay barwaaqada dhaqaale ee Turkiga iyo amniga qaranka si aad u qoto dheer sidii hore, go’aan-qaatayaasha Turkiga waxay ku qasbanaadeen inay leexiyaan inta badan dareenkooda ku aaddan horumarradaas.
Maqnaanshaha taageerada reer Galbeedka ee aan la isku halleyn karin ee xukuumadda talada haysa ee Turkiga, munaasabadda Gulenist Terror Group (FETÖ) ee isku daygii afgembi ee dhicisoobay xagaagii 2016 ayaa sidoo kale sii hurisay shakigii reer Galbeedka ee Turkiga ka lahaa, waxayna xaqiijiyaan qarannimada siyaasadda Turkiga in ay adag tahay maanta.
Sacuudi Carabiya iyo Iiraan ayaa mar kale ku kulmay Ciraaq, sida ay maanta sheegeen ilo-wareedyo gudaha oo dhowr ah, ayada oo ay xoogeysteen wada-hadallada lagu qaboojinayo xiisadda ka dhex-oogan labada dal.
Iiraan iyo Sacuudiga, oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr ah oo ka socda Bariga Dhexe, ayey wada-hadallada u billowdeen bishii Abriil, markii ugu horreysay tan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 2016.
Wada-hadallada oo ay marti-gelienayso Ciraaq oo isku dayeysa inay noqoto dhex-dhexaadiyaha gobolka, ayaa waxaa la billaabay intii uu xukunka hayey madaxweynihii hore ee Iiraan Xassan Rouhani, oo bishii Agoosto uu beddelay Ibraahim Raisi.
Wada-hadallada ayaa horseeday “horumar dhab ah” oo ku saabsan amniga Gacanka, waxaa sidaas sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Iiraan Saeed Khatibzadeh, 23-kii Sebteember.
Wada-hadalladii ugu dambeeyey ayaa waxaa xaqiijiyey saddex ilo-wareedo oo Ciraaqi ah, oo dhammaantood codsaday inaan la magacaabin.
“Sarkaal Iiraani ah ayaa Baghdad kula kulmay sarkaal Sacuudi ah, kadib kulamadii ay horey u yeesheen labada dal,” waxaa sidaas yiri il-wareed la hadlay wakaaladda wararka AFP.
Sidoo kale sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq iyo il-wareed ku dhow dowladda ayaa xaqiijiyey kulanka, ayaga oo aan bixin faah-faahin.
Boqorka Sacuudi Carabiya Salman bin Abdulaziz, oo dhowaan khudbad u jeediyey Golaha Guud ee QM, ayaa sheegay inuu rajeynayo inay miro dhalaan wada-hadallada labada dhinac.
“Iiraan waa dal deris ah, waxaana rajeynayaa in wada-hadalladeena billowga ah ay hoggaamin doonaan natiijooyin la taaban karo oo kalsooni lagu dhiso, oo ku dhisan xushmeynta qarannimada iyo faro-gelin la’aanta arrimaha gudaha,” ayuu yiri Boqor Salman.
Sacuudi Carabiya iyo xulafadiisa Khaliijka ayaa muddo dheer ku dhaleeceynayey Iiraan falalka gurracan ee ay ka waddo gobolka iyada oo adeegsanaysa shabakadaha u adeega ee Yemen, Suuriya, iyo Ciraaq. Wadamada Khaliijka ayaa sidoo kale cambaareeyay barnaamijka Nukliyeerka ee Iiraan, oo Tehran ay ku sheegtay in ujeeddooyin nabadeed ay tahay.
Riyadh iyo Tehran ayaa xiriirka diblomaasiyadeed usa-jaray horaantii 2016-kii kadib markii safaaradda boqortooyada ee Tehran ay weerareen dad badan kadib dilkii wadaad caan ka ahaa shiicada oo lagu dilay Sacuudiga.
Xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii Sacuudi Carabiya ay sheegtay inay taageeri doonto ololihii “cadaadiskii ugu badnaa” ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee cunaqabateyn adag ka dib markii uu dhinac uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee dalku la galay quwadaha adduunka 2015-kii.
Sanadkii 2019, mas’uuliyiinta Mareykanka iyo Sacuudigu waxay sheegeen in Iiraan ay mas’uul ka ahayd gantaal iyo weerar diyaaradeed oo lagu qaaday xarumaha saliidda ee ugu weyn boqortooyada, taas oo si ku-meel -gaar ah u baabi’isay kala -soocidda saliidda ceyriinka.
Itoobiya oo xirtay safaaraddii Qaahira sababo dhaqaale awgood
Safaaradda Itoobiya ee Qaahira ayaa joojineysa shaqadeeda Masar laga bilaabo bisha Oktoobar saddex illaa lix bilood sababo dhaqaale awgood, ayuu ku dhawaaqay safiirka Itoobiya u fadhiya Masar Markos Tekle Rike.
Danjiraha Itoobiya u fadhiya Masar Markos Tekle ayaa yimid Masar bishii Ogoosto 2020. Wuxuu Bare ka ahaa Waaxda Maamulka iyo Daraasaadka Horumarinta ka hor inta uusan ku biirin adeegga diblomaasiyadda Itoobiya 2010. Wuxuu kaloo soo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda, safiirka Japan iyo agaasimaha Machadka Tabbabarka Adeegga Dibadda ee Itoobiya.
Horraantii Sebteember, Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar Sameh Shoukry ayaa sheegay in Masar ay isu xilsaartay wada-xaajood lagu xallinayo xiisadda ka dhalatay Biyo-xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) tobbankii sano ee la soo dhaafay welina ay raadineyso xal nabadeed oo lagu xalliyo arrintan ku saleysan sharciga caalamiga ah iyo dhaqanka ugu fiican.
“Si wanaagsan ayaan wax walba u samaynay si aan u sii wadno wada-xaajoodka waxaanan u malaynayaa inaanay jirin cid raadinaysa khilaaf. Taas bedelkeeda waxaan raadineynaa xal nabadeed oo lagu xalliyo arrintan iyadoo lagu saleynayo sharciga caalamiga ah kuna saleysan dhaqanka ugu wanaagsan. ” Shoukry ayaa u sheegay Bloomberg.
Wuxuu intaas ku daray in rabitaanka siyaasadeed ee dowladda Itoobiya lagu muujin karo iyadoo la saxiixo heshiis.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa bishan ansixiyay bayaan madaxtooyo oo ugu baaqaya dhammaan saddexda dhinac ee ku lugta leh khilaafka webiga Niil inay dib u bilaabaan wada-xaajoodkii ay hoos imanayeen Midowga Afrika.
“Golaha Ammaanku ma aha awoodda u leh murannada farsamo iyo maamul ee ilaha biyaha iyo webiyada.” Qoraalka UNSC ayaa lagu yiri. Golaha Ammaanka ayaa sidoo kale dhinacyada ku booriyay inay dib u bilaabaan wada xaajoodka, iyagoo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in lagu laabto heshiiskii mabaadii’da la saxiixay 2015kii.
Masar ayaa soo dhaweysay bayaankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay soo saaray, kuna dhiirri-geliyay dhammaan saddexda dal inay dib u bilaabaan wada-xaajoodka iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqeynta biyo-xireenka muddo macquul ah.
Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa isku khilaafsan biyo-xireenka 4 bilyan ah; Qaahira waxay ka dhawaajisay walaaca ay ka qabto saami -biyoodkeeda [55.5 bilyan oo mitir kuyuubik] ka dib markii Itoobiya billowday dhismaha biyo-xireenka Niil ee bishii Maay 2011.
Sannadkii 2015kii, saddexda waddan waxay saxiixeen Baaqa Mabaadi’da, kaas oo ay qasab tahay in waddamada hoose [Masar iyo Suudaan] aysan saamayn xun ku yeelan dhismaha biyo-xireenku.
Falanqayn: Masuuliyiin badan oo ku sugan Ankara ayaa rumaysan in Turkigu ka leeyahay faa’iidooyin gaar ah dawladaha kale ee doonaya inay buuxiyaan booska Afgaanistaan ka dib labaatan sano oo uu Maraykanku haystay.
Muddo sanado ah, Turkigu wuxuu door muhiim ah ku leeyahay Afgaanistan. Maanta, saraakiil badan oo ku sugan Ankara waxay rumeysan yihiin in Turkigu ka leeyahay faa’iidooyin gaar ah dowladaha kale ee doonaya inay buuxiyaan booska Afgaanistaan ​​ka dib labaatan sano oo uu Mareykanku iska haystay waddankaas.
Xaaladda hadda ee Kabul waxay u taagan tahay fursadaha Turkiga. Ankara waxaa laga yaabaa inay awood u yeelato inay kordhiso awooddeeda juqraafiyeed ee Bartamaha Aasiya, waliba iyadoo isticmaalayso xulafadeeda NATO, ugu dambaynna hagaajisa mowqifkeeda isbahaysiga dhexdiisa.
Ankara waxay welwel weyn ka qabtaa ururada argagaxisada caalamiga ah oo ka faa’iideysanaya xaaladaha Afgaanistan iyo arrimaha qaxootiga la xiriira. Labaduba waxay halis gelin karaan amniga Turkiga iyo, haddii la dheereeyo, Yurub.
Taariikhdu waa muhiim oo si joogto ah ayey u tixraacaan saraakiisha Turkigu markay ka hadlayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Ankara ee Afgaanistan. Sanadihii 1930-naadkii, Turkidu waxay u direen tababarayaal milatari si ay u caawiyaan milatariga Afgaanistan.
Sanadihii xigay, Turkigu wuxuu gacan weyn ka geystey Afgaanistaan ​​xagga gargaarka xagga waxbarashada iyo dhaqanka. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, Uzbekiska iyo Turkmen (oo ah dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla af Turkiga ee Afgaanistaan) ayaa muhiim u ahaa xiriirka labada dal.
“Ankara waxaa laga yaabaa inay awood u yeelato inay kordhiso awooddeeda juqraafiyeed ee Bartamaha Aasiya oo ay iska dhigto mid ka qiimo badan xulafada NATO”
Xiriirka Turkiga iyo Afgaanistaan ​​(1920- illaa wakhti xaadirkaan)
Intii u dhaxaysay 1920 iyo 1960, Turkigu wuxuu taageeray dadaallada casriyeynta Afgaanistaan wuxuuna kaalin muhiim ah ka qaatay aasaasidda qaab-dhismeedka dawladda casriga ah iyo hay’adaha dawliga ah ee dhinacyada maamulka, milatariga, dhaqanka, waxbarashada iyo caafimaadka. 212 macallimiin, dhakhaatiir, saraakiil iyo khubaro kale oo Turki ah ayaa loo diray Afgaanistaan intii u dhaxaysay 1932 ilaa 1960.
Xiriirka saaxiibtinimo ee dhow iyo iskaashiga labada dal ayaa sii socday ilaa duulaankii Afgaanistaan ee Midowga Soofeet-kii. Kadib dhammaadkii qabsashadii Soofiyeeti sannadkii 1989-kii, Turkigu wuxuu sii waday inuu si dhow ula socdo horumarka Afgaanistan, wuxuuna ku dadaalay inuu gacan ka geysto dadaallada nabadda iyo xasilloonida ee dalkan. Waqtigan xaadirka ah Turkigu wuxuu si firfircoon u taageeraa dadaallada Afgaanistan ee dhinacyada amniga, horumarka iyo dhisidda awoodda.
Siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ee ku wajahan Afgaanistaan waxay ku dhisan tahay afar tiir oo kala ah: ilaalinta midnimada iyo daacadnimada Afgaanistan; sugidda amniga iyo xasiloonida dalka; xoojinta qaab-dhismeed siyaasadeed oo ballaaran oo ka-qaybgalka shacbigu mudnaan u leeyahay ugu dambaynna qorshuhu yahay soo celinta nabadda iyo barwaaqada iyadoo meesha laga saarayo argagixisada iyo xagjirnimada.
Iyadoo la tixraacayo hadafyadan, Turkigu wuxuu gacan weyn ka geystaa Afgaanistaan labadaba heer iyo dadaallada UN-ka iyo NATO. Ka qayb qaadashada wanaajinta xiriirka Afgaanistaan iyo deriskeeda ayaa sidoo kale ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee siyaasadda Turkiga ee ku wajahan Afgaanistaan.
Horraantii qarnigii 21aad. Weeraradii 11-kii Sebteember 2001-kii waxay Turkiga u ahayd laba daran mid dooro. Xubin kamid ah NATO, Turkigu wuxuu si dhow ula midoobay Mareykanka inkasta oo ay jiraan khilaafyo gudaha ah.
Boqolkiiba siddeetan ee dadka Turkiga ayaa ka soo horjeeday in milatariga dalkooda loo adeegsado Afgaanistan ayna gaashaanbuurta NATO ku xasuuqdo dad masaakiin ah oo aan waxbo galansanin. Mucaaridka islaamiga ah ee Turkiga (Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee talada haya, ama AKP, ma aysan awoodin xukunka ilaa doorashooyinkii 2002) waxay ka soo horjeesteen in Ankara ay ciidammo Turki ah geyso Afgaanistaan ​​oo ay u oggolaato Mareykanka in ay adeegsadaan hawada Turkiga iyo saldhigyada milateri ee howlgallada noocaas ah.
Si kastaba ha ahaatee, 1-dii Noofambar 2001, Turkigu wuxuu noqday waddankii ugu horreeyey ee Muslimiin u badan oo ku biira hawlgallada milateri ee Maraykanku hoggaaminayo ee ka dhanka ah al-Qaacida iyo Taaliban. Ankara waxay markii hore 90 askari oo khaas ah u dirtay waqooyiga Afgaanistaan ​​“ugu horreyn si ay gacan uga geystaan ​​tababaridda dagaalyahannada ka soo horjeeda Taaliban iyo taageeridda howlaha gargaarka bani’aadamnimada”.
Isagoo ka baqaya in Muslimiintu rumaystaan ​​in dawladda Turkigu go’aansatay inay taageerto dagaalka Maraykan oo ka dhan ah Islaamka, ayuu Ra’isul-wasaarihii xilligaas Bulent Ecevit ku dhawaaqay in “kuwa u ololeeya ololahan tallaabo ka dhan ah Islaamka ay ka hor imanayaan qiyamka sare ee Islaamka, oo ah diin nabad ah ”.
Laga soo bilaabo 2002, milatariga Turkigu wuxuu ka hawlgalayay Afgaanistaan iyagoo kaashanaya Qaramada Midoobay ama NATO, ama heshiisyo laba geesood ah oo u dhexeeya Ankara iyo Kabul. Muddo labaatan sano ah hawlgalka NATO, in ka badan 500 oo askari oo Turki ah ayaa ku sugnaa Afgaanistaan oo leh kaalin aan dagaal ahayn.
Shaqaalaha milatariga Turkiga ayaa ka shaqeynayay “dadaallada la talinta, dib-u-dhiska iyo dayactirka” intii lagu jiray ololihii Afgaanistaan ee dhawaan ay ka baxeen NATO. Muhiimada ugu badan ee istiraatiijiyadeed, Turkigu waxay maamulayeen Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai ilaa 2015.
Ankara ayaa sidoo kale qayb ka mid ah diblomaasiyadeedda isku dayday inay caawiso Taaliban iyo dawladda Afgaanistan ee hadda la afgambiyay si ay uga wada xaajoodaan nabadda. Hoggaanka Turkigu wuxuu inta badan qabtaa ama kafaala qaadaa wadahadallo oo ay ku jiraan Kabul, Taaliban, iyo Pakistan.
Xukunka cusub ee Taalibanka iyo gegida diyaaradaha caalamiga ah
Iyada oo “Imaarada Islaamiga ah” ay ku soo noqotay awoodda sannadkan, Turkigu wuxuu ku khasbanaaday inuu hagaajiyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee la xiriirta Afgaanistaan. Ankara wax walba si taxaddar leh ayey u ciyaareysaa hadda, kuma boodo qoriga, waxayna Taaliban u aqoonsan tahay inay tahay maamulka Afgaanistan ee sharciga ah.
Magaalada Ankara, ku lug lahaanshaha taliska cusub ee Taaliban ayaa muhiim u ah. Laakiin hoggaanka Turkigu kuma faraxsanayn dhinacyo ka mid ah “Imaaradda Islaamiga ah” ee cusub, sida ka-mid-noqosho la’aanteeda.
“Turkigu weli ma go’aaminin sida loola dhaqmi karo Taalibaan,” ayuu yiri Yusuf Erim, oo ah falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee TRT World oo fadhigiisu yahay Istanbul, wareysi uu siiyay The New Arab ayuu ku sheegay.
“Turkigu miyuu ka shaqeyn doonaa inuu wadahadal la yeesho Taaliban? Dabcan. Laakiin lama joogo saraakiil heerkoodu sarreeyo. Turkigu wuxuu adeegsan doonaa kanaalada heerka hoose sida ergooyinka, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, ama xubnaha laamaha amniga si loo sii wado wadahadalka. Tani waa wax uu Turkigu ku sameeyay dalal aysan Ankara xiriir rasmi ah la lahayn. Tani waxay ku saabsan tahay fahamka waxa Taalibaan rabto iyo meesha Taalibaan ay taagan tahay. Turkiga ayaa sidoo kale u gudbin doona shuruudaha ay u baahan doonaan aqoonsi rasmi ah oo Taaliban ah inay tahay dowladda sharciga ah ee Afgaanistan. ”
Turkiga oo ka shaqeynaya garoonka diyaaradaha ee Kabul iyo u aqoonsashada Taaliban inay tahay dowlad sharci ah kuma imaan heshiis xirmo. “Turkigu wuxuu ka hawlgeli karaa gegida dayuuradaha isagoo aan aqoonsan Taaliban,” ayuu yiri Erim.
“Haddii Turkigu maamulo garoonka diyaaradaha, tani waxay dammaanad ka qaadaysaa beesha caalamka, NGO-yada, iyo kooxaha gargaarka bani’aadamnimada inay ku kalsoon yihiin in gegida dayaaraduhu sugan yihiin oo si xirfadaysan loo maamulo. Tani waa wax u wanaagsan Taaliban, sidaa darteed marka laga eego dhanka Ankara waa inay ku timaadaa iyada oo aan lahayn wax xarig aqoonsi ah.”
Xiriirka Turkiga iyo Qadar ayaa muhiim u ah qorshayaasha Ankara ee Afgaanistaan. Sida diblomaasi sare ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdulraxman al-Thani uu dhawaan u sheegay Financial Times, Doha iyo Ankara ayaa isku dubbaridaya dib u furista garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Maaddaama ay tahay GCC-da saamaynta ugu badan ee diblomaasiyadeed ku leh Taaliban, Qadar waxay caawin doontaa Turkiga (oo ah saaxiib dhow oo si weyn uga qaybqaatay awoodda Doha inay iska caabiso cadaadiska uga imanaya waddamada go’doomiyay intii u dhexeysay 2017 iyo Jannaayo ee sannadkan) marka ay timaaddo Ankara oo fulinaysa danaheeda Afgaanistaan.
Awoodda Juqraafiga Siyaasadeedka (Geopolitics)
Doorka Ankara ee Afgaanistaan ​​wuxuu kor u qaadi karaa awoodda Turkiga ee gobolka iyada oo saameyn ku yeelan doonta xiriirka ay la leedahay quwadaha adduunka. Ryan Bohl, oo ah falanqeeye Bariga Dhexe ee la-talinta halista Stratfor/Rane, ayaa u sheegay The New Arab sidaan “Dhanka kale iyadoo la yareynayo caqabadaha bani’aadamnimo ee Afgaanistaan, Turkigu wuxuu siiyaa adeeg waxtar u leh beesha caalamka iyo gaar ahaan NATO.”
Sida falanqeeyayaasha, Mustafa Gurbuz ay xuseen, waxaa jira aragtida Turkiga ee Afgaanistaan ​​inay tahay “gorgortan suuragal ah” oo Ankara ay kula macaamili karto maamulka madaxweyna Joe Biden iyada oo uu jiro xiriirkooda cakiran ee kadib ka bixitaankii Mareykanka, oo aad uga xumaaday Aqalka Cad.
“Dowladda Turkigu waxay rumeysan tahay in kaalin kasta oo muhiim ah oo lagu caawinayo nidaamka cusub ee Kabul ay faa’iido yeelan doonto, iyadoo aan loo eegin haddii taasi ay la jaanqaadi doonto danaha NATO. Erdogan wuxuu sabab uga dhigayaa haddii Afgaanistaan ​​aan loo adeegsan karin inuu helo raalli ahaanshaha Washington, markaa waxaa laga yaabaa in loo soo bandhigo sidii gorgortan si loo helo tanaasul arrimaha kale ee muranka leh ee xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. ”
“Iyada oo ‘Imaarada Islaamiga’ ay ku soo noqotay awoodda sannadkan, Turkigu wuxuu ku khasbanaaday inuu hagaajiyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee la xiriirta Afgaanistaan”
Arrinta gegida dayuuradaha ayaa muhiim u ah xiriirka Shiinaha iyo Turkiga. Iyada oo Shiinuhu doonayo in uu arko Afgaanistaan oo si weyn muhiim ugu ah Hindisaha Belt and Road Initiative (BRI), saamaynta Turkiga ee dalka dagaalladu halakeeyeen waxay ku dari kartaa aragtida Beijing ee Ankara oo ah awood ay kula dagaallami karto Bartamaha Aasiya – oo ah gobol uu Turkigu doonayo.
“Markaan eegno Afgaanistaan, waxay xuduud la leedahay Pakistan iyo Iran,” ayuu yiri Erim. “Juqraafigaan aadka u muhiimka ah micnaheedu waa inay caqabad ku noqon doonto qorshaha BRI ee Shiinaha. Joogitaanka Afgaanistan waxay Turkiga siin doontaa aalad diblomaasiyadeed oo ay kula macaamisho Beijing.”
Horumarinta xiriirka Turkiga iyo Daalibaan
Maanta, taliska cusub ee Afgaanistaan wuxuu xod-xodanayaa Ankara. Khubarada qaar ayaa ku adkeysanaya in Daalibaan ay asal ahaan u baahan tahay Turkiga xilligan. Isagoo u eegaya Turkiga (in kasta oo uusan NATO ahayn isbahaysi) oo uu yahay “lamaane lagama maarmaan ah” ee Daalibaan, “Imaaradda Islaamiga ah” ayaa dabcisay mowqifyadeedii ka dhanka ahaa Turkiga waxayna oggolaatay inay wadahadal la yeelato saraakiisha Ankara ee Turkiga, oo sii wada doorka Afgaanistan.
Iyada oo xukuumadda cusub ee Kabul ay diiradda saareyso caqabadaha xukunka Afgaanistan, oo ka soo horjeeda in la qaado kacdoon, su’aalaha sida hawlgalinta garoonka kaliya ee caalamiga ah ee dalka ayaa aad muhiim ugu ah Taaliban.
Shaki kuma jiro in Turkiga oo ka hawlgala gegida dayuuradaha uu yahay isha ugu muhiimsan ee Ankara laga helo awoodda Afgaanistan. “Taalibaanku waxay u baahan yihiin taageero farsamo oo ka timaada meelaha sida Turkiga si ay wax uga dhigaan sida garoonka diyaaradaha Kabul oo kale,” ayuu yiri Bohl.
Aqoonsiga diimeed iyo siyaasadeed ee Turkigu wuxuu quseeyaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Ankara ee Afgaanistaan. “Aqoonsiga Islaamiga ah ee Turkiga ayaa qayb ka ah sababta uu Turkigu u gaarsiinayo Afgaanistaan si uu kaalin wax ku ool ah uga qaato xilligii Mareykanka ka dib dalkaas,” ayuu yiri Bohl. “Turkigu wuxuu isku dayayaa inuu gubo aqoonsigiisa Islaamnimada isagoo kaalin wax ku ool ah ka leh dal kale oo Muslim ah sida Afgaanistan.”
13-kii Sebteember, afhayeenka Daalibaan Suhail Shaheen wuxuu yiri “waxaan u aragnaa Turkiga inuu yahay dal Muslim ah oo walaal ah” iyo in Taaliban ay “ixtiraamto” siyaasadda arrimaha dibadda ee Ankara. Laakiin ficil ahaan, ma aha hadal-ku-sheeg keliya, ma cadda illaa heerka aqoonsiga Islaamka ee Turkigu uu saamayn ku yeelan doono habka ay Taaliban u aragto doorka Ankara ee Afgaanistaan.
Haddana waxay u muuqataa in danaha ugu weyn ee Daalibaan ee Turkiga aysan ku xirnayn Islaamka, laakiin ay tahay awoodda ay Turkigu u leeyihiin inay miiska soo saaraan wax ku saabsan Afgaanistaan xagga dhismaha, maalgashiga, waxbarashada, injineernimada, iyo wixii la mid ah. Sida Bohl uu u dhigayo, “Xiriirka Turkiga ee Taalibaan wuxuu hadda ku salaysan yahay waxqabad halkii uu ka ahaan lahaa wax fikrad ah ama xitaa diin ah.”
Walaaca Turkiga ee Afgaanistan
Dhammaan fursadaha juquraafi, dhaqaale, iyo diblomaasiyadeed ee Afgaanistaan ka dib laga yaabo inay siiso Ankara, Turkigu wuxuu ka baqayaa sida xaaladda waddankii dagaalladu halakeeyeen ay u xuubsiibato.
Ankara waxay ka walaacsan tahay suurtagalnimada kooxaha xagjirka ah ee rabshadaha wata sida Gobolka Khorasan ee Dawladda Islaamiga si ay uga faa’iidaystaan xaaladaha Afghanistan ee hadda jira. Waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in argagixisada ka soo jeeda Aasiyada Dhexe, ee aysan ahayn Carab, ay dalalku fuliyeen weeraradii ugu dhimashada badnaa ee Daacish ka fuliso Turkiga, iyagoo hoosta ka xarriiqaya sida ammaanka Aasiyada weyn oo muhiim u ah nabadda muddada dheer ee Turkiga.
Sida Erim u sharxay, Afgaanistaan waa “albaab” laga galo Bartamaha Aasiya. “Nooc kasta oo xasilooni darro ah oo ka jirta Afgaanistaan waxay sidoo kale leedahay suurtagalnimada inay ku faafto xudduuddeeda taasina waa wax uusan Turkigu doonayn inuu arko hadda.” Xoogagga Jihaad-doonka ah ee ku sugan Bartamaha Aasiya ayaa soo dhex geli kara Turkiga oo walaac amni qaran ah.
“Dhammaan fursadaha juqraafiyeed, dhaqaale, iyo diblomaasiyadeed ee Afgaanistaan laga yaabo inay Ankara siiso, Turkigu wuxuu ka baqayaa sida xaaladda waddankii dagaalladu halakeeyeen ay u xuubsiibato”
Haseyeeshee arrinta qaxootiga ayaa ah waxa ay keenaysaa walwalka Turkiga. “Walaaca ugu weyn ee Turkiga ee Afgaanistaan ​​ayaa ah in laga hortago daadad kale oo muhaajiriin ah inay gaaraan Turkiga oo ay ku noqdaan culays cusub iyo dhaqaalahooda oo aad u liita,” ayuu yiri Bohl. Hoggaanka Turkiga, oo hadda marti-galiyay 3.7 milyan oo qaxooti ah, ayaa ku dhawaaqay in dalku uusan aqbali karin mowjadaha qaxootiga Afgaanistaan.
Dhinaca kale, Ankara ayaa aaminsan in beesha caalamku ay hoos u dhigtay Turkiga markii ay timaaday wax ka qabashada qaxootiga Suuriya. Hadda Turkigu ma rabaan inay qaadaan culeys kale oo culus marka la eego qaxootiga Afgaanistaan ​​oo ka soo horjeeda dhibaatooyinka daran ee dhaqaalahooda.
Xarumaha masaafurinta ee Turkiga waxay leeyihiin qaxooti Afgaanistaan ​​ah oo aad u sarreeya, laakiin, ugu yaraan sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Turkiga, dib uguma celinayaan Iran iyo/ama Afgaanistaan ​​sababo la xiriira xuquuqda aadanaha. “Saraakiisha Turkiga ayaa iyaguna sugaya inay arkaan waxa xiga ee dhacaya, iyagoo sheegaya inay dhici karto toddobaadyo ama bilo ka hor inta aysan dib u bilaabin masaafurinta,” ayaa lagu soo wariyay Heather Murdock oo ka tirsan Codka Mareykanka dabayaaqadii bishii hore. “Turkigu hadda wuxuu leeyahay 25 xarumood oo masaafurin ah, dhammaantoodna waxaa buuxiyay inta badan qaxootiga Afgaanistaan, waxayna qorsheyneysaa inay dhisato sideed kale.”
Marka la eego dareenka ka dhanka ah qaxootiga iyo carada sii kordhaysa ee Turkiga, soo gelitaanka qaxooti badan oo Afgaanistaan ​​ah oo dalka soo gala waxay yeelan kartaa saamayn weyn oo siyaasadeed iyo mid bulsho.
Waa sidee Doorka Turkiga ee Afgaanistaan?
Markaan fiirino, Turkigu wuxuu leeyahay hamiyo uu ku ballaarinayo kaalintiisa Afgaanistaan ​​isaga oo la kaashanaya jilayaasha kala duwan ee dalka ay colaaddu ka jirto. Saraakiisha Ankara waa ay ka go’an tahay inay muujiyaan mooqidkooda si togan, beesha caalamka horteeda waxayna muujinayaan inay si iskaashi leh ula dhaqmeyso xulafada muhiimka ah ee Galbeedka, Gacanka, iyo Galbeedka Aasiya oo dhan ee ku wajahan Afgaanistan.
Waxay u badan tahay, Turkigu wuxuu aad u danayn doonaa inuu taageero dadaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee loogu talagalay in lagula xisaabtamo Daalibaan xeerarka sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha, gaar ahaan marka la eego haweenka iyo kooxaha kala duwan ee laga tirada badan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay inay goor hore tahay in la go’aamiyo in Turkigu uu haysto fursad dhab ah oo uu ku saamayn karo Taaliban. Iyada oo aan la garanayn doorsoomayaal badan xilligan la joogo, ayaa waxaa jira hubanti la’aan badan oo ku xeeran mustaqbalka xiriirka Turkiga iyo Taaliban.
Laakiin Ankara waxaa laga yaabaa inay ka taagan tahay meel adag si ay ugu biirto Qadar marka loo eego sidii ay ugu shaqayn lahayd sidii buundo u dhexaysa “Imaarada Islaamiga ah” iyo guud ahaan beesha caalamka.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku celceliyay baaq ku saabsan in la joojiyo dagaalka Kuuriya
“Waxaan mar kale ku boorinayaa bulshada quruumaha inay abaabulaan xooggooda si loogu dhawaaqo dhammaadka dagaalka ee gacanka Kuuriya,” ayuu Moon ku yiri khudbad uu ka jeediyay isu imaatinka sannadlaha ah ee ururka adduunka.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa Talaadadii khudbad ka jeediyay Golaha Guud ee Qaramada Midoobey wuxuuna ku celiyay baaq loogu yeeray in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalkii Kuuriya 1950-1953.
“Waxaan soo jeedinayaa in saddexda xisbi ee labada Kuuriya iyo Mareykanka, ama afar xisbi oo ka mid ah labada Kuuriya, Mareykanka iyo Shiinaha ay isu yimaadaan oo ay ku dhawaaqaan in dagaalkii gacanka Kuuriya uu dhammaaday,” ayuu yiri.
Kuuriyada Waqooyi ayaa muddo dheer raadinaysay in si rasmi ah loo soo afjaro Dagaalkii Kuuriya si loo beddelo hub-joojiyaha joojiyay dagaalka laakiin isaga tagay iyo Taliska Qaramada Midoobay ee uu hoggaaminayo Mareykanka oo weli farsamo ahaan dagaal ku jira.
Moon, oo ku hawlanaa isku dayga la shaqaynta Kuuriyada Waqooyi muddadii uu madaxweynenimada ahaa, ayaa ku dooday in ku dhawaaqidda noocan ahi ay dhiirri-gelinayso Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasusho hub ka dhigisteeda. Washington ayaa sheegtay in Pyongyang ay tahay inay marka hore ka tanaasusho hubkeeda nukliyeerka.
Goor hore oo Talaadadii ah, Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad ka jeediyay fadhiga Qaramada Midoobey wuxuuna sheegay in Mareykanku uu raadinayo “diblomaasiyad dhab ah oo joogto ah si loo sii wado hub ka dhigista gabi ahaanba gacanka Kuuriya.”
“Waxaan raadineynaa horumar la taaban karo oo ku aaddan qorshe la heli karo oo leh ballanqaadyo la taaban karo oo kor u qaadi doona xasilloonida Jasiiradda iyo gobolka, iyo sidoo kale hagaajinta nolosha dadka ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya,” ayuu yiri, isagoo adeegsanaya magaca rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. .
Kuuriyada Woqooyi ayaa ku gacan seyrtay baaqyadii Mareykanka ee ahaa in dib loogu laabto wada-hadallada, madaxa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta atomigga ayaa toddobaadkan sheegay in barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang uu “si buuxda u socdo”.
“Maraykanku ma laha ujeedo cadowtinimo oo ku wajahan Pyongyang wuxuuna diyaar u yahay wakhti kasta iyo goob kasta,” ergayga gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay Isniintii mar uu booqday Kuuriyada Koonfureed.
Sung Kim ayaa Sabtidii gaaray Seoul booqasho afar maalmood ah.
Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo si kooban u dhex-martay cilaaqaadkii u dhexeeyay Kuuriyada bishii Luulyo oo ay keentay is-maandhaaf cusub oo ku saabsan dhoolatusyada milateri ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo Kuuriyada Waqooyi ay ka digtay inay kicin karto xiisad amni.
“Mareykanku ma lahan ujeedo colaadeed oo ku wajahan (Kuuriyada Waqooyi),” ayuu Kim u sheegay wariyeyaasha kaddib markii uu la kulmay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed, Noh Kyu-duk.
“Hawlgallada milatari ee socda (Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed) ee la isku daray waa kuwo soo jireen ah, joogto ah, oo si dabiici ah u difaacaya oo taageeraya ammaanka labada dalba.”
Noh ayaa sheegay in labadoodu ay ka wada hadleen suurtogalnimada gargaarka bani’aadamnimo ee Kuuriyada Waqooyi, iyo sidoo kale siyaabaha dib loogu bilaabi karo wadahadalada baabi’inta nukliyeerka.
“Waxaan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno sidii dib loogu bilaabi lahaa wada-xaajoodka Kuuriyada Waqooyi sida ugu dhaqsaha badan,” ayuu yiri.
Axaddii Kim ayaa kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Chung Eui-yong hoyga wasiirka, halkaas oo ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa geedi socodka nabadda ee gacanka Kuuriya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
Wareysi uu siiyay KBS oo ah warbaahinta qaranka Kuuriyada Koonfureed, Kim ayaa ku booriyay Pyongyang inay ku soo laabato wadahadalka, isagoo sheegay in Washington ay diyaar u tahay inay wax ka qabato tabashooyinka ay qabaan.
“Waxaan diyaar u nahay inaan wax ka qabanno dhammaan arrimaha iyo tabashooyinka oo dhan oo ay ku jiraan kuwa muhiimka u ah DPRK (Jamhuuriyadda Dadka Dimuqraadiga ah ee Kuuriya),” ayuu yiri Kim. “Haddii aan helno fursad waxaan awoodi doonnaa inaan sameyno horumar la taaban karo.”
Ergayga Maraykanka ayaa la filayaa inuu Talaadada la kulmo Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibedda ee Raashiya Igor Morgulov oo ku sugan magaalladda Seoul.
Dhoolatuska milatari ee wada jirka ah oo soconaya sagaal maalmood ayaa bilaabmay 16-kii bishii Agoosto, iyada oo aamusnaanta ay ka fog tahay warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi inkasta oo laga baqayo in dalku sameeyo tijaabo gantaal ama uu qaado tallaabooyin kale si uu u muujiyo diidmadiisa.
Kuuriyada Woqooyi waxay sheegtay inay u furan tahay diblomaasiyadda, laakiin in tillaabooyinka Mareykanka ay u muuqdaan kuwo madhan halka “falalka cadaawadda leh” sida dhoolatusyada ay sii socdaan.
Maamulka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay sahamin doonaan diblomaasiyadda si loogu gun-gaaro Nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, laakiin muu muujin rabitaan ah in la yareeyo cunaqabateynta.
Mareykanka ayaa taageera dadaallada lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya labada Kuuriya welina waa u furan yahay wadahadallada tooska ah ee Pyongyang, ayuu yiri Kim.
“Waxaan sii wadaa inaan diyaar u ahaado inaan kula kulmo dhiggeeyga Kuuriyada Waqooyi meel kasta waqti kasta,” ayuu yidhi.
Muxuu Mareykanka ugu hanjabay Itoobiya inuu saari doono cunaqabateyn culus?
Xariirka ka dhaxeeyo Itoobiya iyo Maraykanka waa xidhiidh laba geesood ah oo u dhexeeya Itoobiya iyo Maraykanka. Itoobiya waa saaxiibka istiraatijiyadeed ee Mareykanka ee Dagaalka Caalamiga ee Argagixisada se maanta xaalka xagguu marayaa?
Bidax RW dalka Itoobiya Abiy Axmed, Midag Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken
Dowladda Mareykanka ayaa u gogol-xaartay tallaabo cunaqabateyn cusub oo dheeraad ah oo lagu saarayo dhinacyada ku dagaallamaya waqooyiga Itoobiya, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo.
Amar fulineed cusub oo ka soo baxay Aqalka Cad ayaa u oggolaanaya Washington inay qaaddo tallaabo ciqaab ah oo ka dhan ah xubno ku jira dowladaha Itoobiya iyo Eriteriya, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigrayga (TPLF) iyo dowlad-deegaanka Amxaarada haddii ay door ka qaataan sii socoshada colaadda, carqaladeynta gargaarka bani’aadamnimada ama ay geystaan xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah.
Tallaabadan oo caddaadiska ku saareysa dhinacyada dagaallamaya inay yimaadaan miiska wadahadalka, ayaa timid kadib markii Washington ay marar badan ku baaqday in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolka waqooyi ee Tigray, halkaas oo colaaddu ka bilaabatay.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku hanjabay in maqnaashaha xabad-jooginta iyo in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda Itoobiya inay sababi doonto in Mareykanku uu magacaabi doono hoggaamiyeyaal, ururro iyo hay’ado gaar ah, kuwaas oo la saari doono cunaqabateyn cusub.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in warqad uu ra’isul warsaaraha Itoobiya Abyi Axmed uu diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu Mareykanka ku eedeyay inay ku gul-darreysteen inay ka taageeraan halganka ay kula jirto TPLF.
Dowlad-deegaanka Amxaarada ayaa sheegtay inay iyana ka walaacsan tahay in Amxaarada lagu daro amar fulineedka Madaxweynaha Mareykanka, laakiin waxay ballan qaadday inay taageeri doonto baaritaanka Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo Waaxda Maaliyadda.
Wasiirka warfaafinta Eriteriya iyo afhayeenka kooxda TPLF ayaan weli wax hadal ah ka soo saariin arrintan.
Dagaalka gobolka Tigray
Dagaalo bahalnimo ah oo bilooyin ka socday guud ahaan gobolka Tigray ee Itoobiya ayaa sababay in malaayiin qof oo gudaha ku barakacay ay baahi weyn u qabaan gargaar cunto. In ka badan 150,000 oo ah dad sabool ah oo argagaxsan – oo ay ku jiraan carruur waalidkood waayey ayaa magangalyo u doontay caasimadda gobolka, Mekelle.
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay dhibaato bani’aadanimo oo ba’an, oo ay kumannaan qof ku dhinteen, in ka badan shan milyanna ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo. UNICEF ayaa soo warisay in nafaqo-xumadu ay saamayn karto in ka badan 100,000 oo carruur ah sannadka soo socda.
Ururada aan dawliga ahayn waxay ku eedeeyaan dhammaan dhinacyada xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo gabood-fallada sida kufsiga, dhaca iyo dilalka dadka rayidka ah. USAID waxay ku qiyaastay in ilaa 900,000 oo qof oo Tigray ah ay wajahayaan xaalado macaluul oo ”aadamigu sameeyay” halka adeegyada taleefanka, internetka iyo bangiyada ay go’an yihiin.
Qaramada Midoobey ayaa ka cawday caqabado xagga maamulka ah iyo dhibaatooyin kale oo ka hortaagan kolonyada gargaarka iyo shaqaalaha inay gaaraan goobaha ay dhibaatadu saameysey.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay dowladda Federaalka Itoobiya ay dagaal ku qaado qowmiyad ka tirsan nidaamkeeda federaalka ah ee ku dhisan qowmiyadaha. In ka badan labaatan sano, Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) waxay u halgamaysay sidii aayo-ka-talinta loogu heli lahaa Soomaalida ku nool Dawlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya (oo sidoo kale loo yaqaanno gobolka Ogaadeenya).
ONLF waxay samaysatay koox wadani ah 1984. Waxay ku guulaysteen doorashooyinkii golaha deegaanka ee ugu horreeyey ee SRS sannadkii 1992 ka dib markii la afgambiyay taliskii milateriga Itoobiya 1991kii oo la keenay nidaamka federaalka qowmiyadaha ee Itoobiya. Kooxdu waxay u jeesatay kacdoon hubaysan 1994, ka dib markii ay isku khilaafeen dawladda federaalka ee ku saabsan xuquuqda aayo-ka-tashiga Soomaalida iyo ka dib markii dhowr ka mid ah hoggaamiyayaashoodii la xiray lana dilay.
Colaadda ayaa ka dhigtay gobolka Soomaalida mid ka mid ah gobollada ugu saboolsan Itoobiya – celcelis ahaan, ku dhawaad laba milyan oo qof ayaa ku tiirsan gargaarka cuntada sannad kasta.
Xariirka Itoobiya iyo Mareykanka ee wakhtigaan?
Xariirka ka dhaxeeyo Itoobiya iyo Maraykanka waa xidhiidh laba geesood ah oo u dhexeeya Itoobiya iyo Maraykanka. Itoobiya waa saaxiibka istiraatijiyadeed ee Mareykanka ee Dagaalka Caalamiga ee Argagixisada. Dhinaca kale, Maraykanku waa deeq-bixiyaha ugu weyn Itoobiya: sannadkii 2008 kaalmada dibadda ee Maraykanku siiyey Itoobiya waxay ahayd US $969 milyan, sannadkii 2009 US $916 milyan, iyadoo 2010 lagu qiyaasay US $513 milyan iyo US $586 milyan oo la codsaday 2011.
Kaalmada horumarineed ee Maraykanku siiyo Itoobiya waxay diiradda saaraysaa yaraynta saboolnimada iyo taageeridda horumarinta dhaqaalaha waxay xooga saareysaa dib-u-habaynta siyaasadda qaybta dhaqaalaha, maamulka, iyo arrimaha bulshada. Qaar ka mid ah maalgelinta waxay ku baxdaa tabbabarka milateriga, oo ay ku jiraan tabbabarka arrimaha sida xeerarka dagaalka iyo dhawrista xuquuqda aadanaha, ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Dhawaan ayaa dowladda Itoobiya lagu dhaliilay xadgudubyo ba’an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Sida laga soo xigtay Hay’adda Human Rights Watch, gargaarka uu Maraykanku bixiyo waxaa loo adeegsadaa xadgudub si loo baabi’iyo dimuqraadiyadda Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, bishii Sebteember 2020, Mareykanka ayaa hakiyay qeyb ka mid ah kaalmadii dhaqaale ee uu siin jiray Itoobiya sababo la xiriira horumar la’aanta laga gaaray wada-xaajoodka Suudaan iyo Masar ee ku saabsan dhismaha Biyo-xidheenka Weyn ee Itoobiya.
Safiirka hadda ee Itoobiya u fadhiya Mareykanka waa Fitsum Arega; wuxuu sidoo kale aqoonsi ka haystaa Canada iyo Mexico. Masuuliyiinta ugu muhiimsan ee Maraykanka waxaa ka mid ah Danjire Michael A. Raynor iyo Ku-xigeenka Ergayga Troy Fitrell. Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya waxay ku taallaa Addis Ababa.